ထွင်းထုအတွက်အကောင်းဆုံးသစ်သားငါးခု - MiCond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ထွင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသစ်သားငါးခု
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-05-22 မူလ:ဆိုက်ကို
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် WoodCarving ဖန်တီးမှုတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထွင်းထုရန်အတွက်အလွန်သင့်တော်သောသစ်သားအချို့ရှိသည်။
သစ်သားသည်အလွန်ခဲယဉ်းသည်. Tသူဖွဲ့စည်းပုံထူထောင်နိုင်ပြီးပါးလွှာနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင်ပစ္စည်းများအလှဆင်ခြင်းအတွက်ပစ္စည်းအရောင်, ပုံစံသို့မဟုတ် texture သည်လှပပြီးထူးခြားသင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်နိုင်သည်စာချုပ်နှင့်အတူအလှဆင်အချို့ကိုထွင်းထုရန် edပန်းပုတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ကော်ဂုဏ်သတ္တိများအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာဖြတ်ဖို့လွယ်ကူသည်ကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဒါကြောင့်မပြိုကျသို့မဟုတ်ချိုးမထားဘူး. ထိုအရာသေးငယ်တဲ့ကျုံ့, အဘယ်သူမျှမအက်ကွဲသို့မဟုတ်ပုံပျက်သောရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Buxus Linnpyruslတည်းခိုခန်း, Dalbergia Odorifera, ormosia microphylla,sAppanwood, walnut,cInnamomum Camponhora, Litchiသစ်သားlonganသစ်သား,Cassia Siamea LamS, Sabina နှင့်တင်သွင်းသော Mahogany နှင့်budingaစသည်တို့ကိုစသည်တို့.
အကောင်းဆုံးသစ်သားသည်အနီရောင်သဲသစ်သားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူပိုင်းအာရှ, ခရမ်းရောင်ခရမ်းရောင်တွင်ထုတ်လုပ်သောအဖိုးတန်သောသစ်သားတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါဟာ s ဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်လူသိများ Oloid နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့‘Mahogany’. Cအားဖြင့် arvedWood Scraping ကိရိယာများနှင့်အလွန်အမင်းအားဖြင့်ပွတ်polishing tool ကို၎င်းသည်အနက်ရောင်ကျောက်စိမ်းအရောင်နှင့်အလွန်လှပသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောထွင်းထုရန်သင့်တော်ပြီးအဆင့်မြင့်လက်မှုပညာနှင့်လက်တွေ့လက်မှုပညာအတွက်အများအားဖြင့်သင့်တော်သည်။
Ebony သည်အဖိုးတန်သောသစ်သားလည်းဖြစ်သည်။pတရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်နိုင်ငံတွင် roduced. It တွင်အစိုင်အခဲအရောင်များ, အနက်ရောင်အရောင်နှင့်သစ်သားအများအားဖြင့်eဘုံသစ်သားဟုလူသိများသောစပါးကို။ မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိပါတယ်Ebony Wood.Itiရေ၌နစ်မြုပ်ရန်စစ်မှန်တဲ့. Ifနစ်မြုပ်ပါဘူးရေ,if from ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောထွင်းထုခြင်းနှင့်အများအားဖြင့်အဆင့်မြင့်လက်မှုပညာအတွက်သင့်တော်သည်။
Mahlogany သည်အရှေ့တောင်အာရှ၏အပူပိုင်းဒေသဒေသများတွင်ထုတ်လုပ်သည့်အဖိုးတန်တင်သွင်းထားသောသစ်များလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ texture crisscross နှင့်လှပသောဖြစ်ပါတယ်. Tသူသည်အစိုင်အခဲနှင့်အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းသည်. ယင်းအရောင်သည်အဝါရောင်နှင့်အနီတွင်အနီဖြစ်ပြီးအစအ ဦး အနေဖြင့်ကြာမြင့်စွာအပြီးခရမ်းရောင်လှည့်သည်။ ဒါဟာပြီးနောက်အလွန်အမင်းလှပသောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မြင့်မားစွာပွတ်နှင့်အားဖြင့်ဖယောင်းအကောင်းဆုံးishရေ။ မျိုးစုံသေးငယ်တဲ့ယာဉ်တန်းထစ်များနှင့် Mahogany Furniture ထွေးထွက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်ပန်းပုကိရိယာအစုံ.
သစ်သားကဲ့သို့သောသစ်သားအတွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ,yleft သစ်တော်သီးနှင့်သေးငယ်သောအရွက်အနီရောင် Sandalwood သည်ရှားပါးမှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်, အသင့်တော်ဆုံးပန်းပုရုပ်သစ်သားဖြစ်bUxus Microphylla ။
၏ပစ္စည်းbUxus Microphylla သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောထွင်းထုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆအလွန်မြင့်မား။ ရေနံကြွယ်ဝသည်။ ကြီးထွားမှုနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သစ်သားတည်ငြိမ်မှုသည်အလွန်အားကောင်းလာသဖြင့်အလွယ်တကူပုံပျက်။ အက်ကွဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဟုတ်တယ်သုံးကားedနှင့်အတူသစ်သားထွင်းထုလက်မှုပစ္စည်းများသို့သေးငယ်တဲ့ပန်းပုကိရိယာများ။ ၏အရောင်bUxus Microphylla သည်အလွန်ကြော့ရှင်းသည်အရာအဖြစ်လူသိများသည်‘သစ်သားအတွက်ဆင်စွယ်’။ ရက်ရက်ရောရောအဝါရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်အလွန်နက်စွာenedအချိန်။ အားဖြင့်ပွတ်ပြီးနောက်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ,bUxus Microphylla ရှိပါတယ်ivory texture တူသော texture, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စိုစွတ်။
Black Walnut သည်ခက်ခဲသောသစ်သားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏ကြွယ်ဝသော texture နှင့်အရောင်သည်လှပသောထွင်းထုထားနိုင်သည်။ ၎င်း၏အမြင်အာရုံအယူခံဝင်မှုကြောင့်ပန်းပုဆရာများစွာသည်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုကြသည်သစ်သားပန်းပေြာက်ဒါကြောင့်နှင့်အတူထွင်းဖို့ခက်ခဲပေမယ့်ပေမယ့်Mini ပန်းပုကိရိယာများ။ ထို့ကြောင့်, ဘယ်အချိန်မှာအနက်ရောင် walnutဖြစ်သုံးကားedသေချာအောင်လုပ်ပါလေှျာက်တောင်းသင့်လျော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ် sculစကားဝှက်Pကိရိယာများ ing, လက်ကိုအလွန်အကျွံဖိအားကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့။
အမျိုးမျိုးသောသစ်သား styles ပြီးနောက်ဖြစ်သဘောဒေသာအိုးd,လူထုကွဲပြားခြားနားသောထွင်းထုရန်မည်သည့်သစ်သားအမျိုးအစားကိုမည်သည့်သစ်သားအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်သည်ပြန်. ဖြည့်s ။
ပန်းပုတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများ ကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း Wood Scraping ကိရိယာများ Power Polishing tool ကို အကောင်းဆုံး Rotary tool ကို ပန်းပုကိရိယာအစုံ သေးငယ်တဲ့ပန်းပုကိရိယာများ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ Mini ပန်းပုကိရိယာများ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ